Ungakukhansela kanjani ukubhaliswa kwe-Netflix kungakapheli imizuzu engu-2? - Ungakwenza Kanjani
Ufuna ukukhansela okubhaliselwe kwakho kwe-Netflix? Labo abangaqiniseki noma abangazi ukuthi bangakwenza kanjani, lo mhlahlandlela uzokusiza ufunde zonke izindlela ezaziwayo. Ngokufanayo, kuzosebenza njengesibuyekezo kulabo asebevele bezazi lezi zindlela ukuqinisekisa ukuthi ulandela inqubo ngendlela efanele.
Ungayikhansela Kanjani iNetflix?
INetflix yaziwa ngokuqukethwe kwayo kwe-premium, i-interface elula, nezinsizakalo eziqondile. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, ungahle uthande ukuthatha ikhefu. Mhlawumbe ufuna ukuzama ezinye izinsizakalo, noma mhlawumbe uzikhipha ohlwini lwesilingo. Akunandaba ukuthi unasiphi isizathu, sikulethela uhlu oluphelele lwemihlahlandlela yezinyathelo nezinyathelo ukukusiza ukuthi uzikhiphe ohlwini lweNetflix.
Izibalo zeNetflix (2020) - Imininingwane Yemali Engenayo
Ukususa Iphrofayela Akuyona Inketho -
INetflix inenketho enhle yokwenza amaphrofayli wangokwezifiso ukwaba insiza nabangani bakho noma umndeni wakho. Ivumela wonke umuntu ukuthi abe nokuhlangenwe nakho okwenziwe kwaba ngokwakho nezincomo ngokuya ngemisebenzi yakho yokusakaza edlule.
Kodwa, ukususa iphrofayela yakho ngeke kuqede ukubhalisa kwakho. Noma ususa wonke amaphrofayli, ungahlala njalo wenza amasha. Uma udala amaphrofayili ahlukile, i-Netflix ayikukhokhisi. Ngokufanayo, umjikelezo wokukhokha ngeke uphele ngokususa iphrofayela.
Ungakhiphi uhlelo lokusebenza -
Elinye iphutha elejwayelekile abantu benza ukukhipha i-App ngaphandle kokulandela umthetho olandelwayo wokukhansela. Noma ukhipha inqolobane, sula idatha, futhi ukhiphe i-App, ngeke imise umjikelezo wokukhokha. Umjikelezo wokukhokha uxhunywe kunketho yakho oyithandayo yokukhokha. Kungaba yikhadi lesikweletu, ukudluliswa kwebhange, noma okunye. Uhlelo lwakho lokusebenza luyindlela nje yokukunikeza ukufinyelela kuzinsizakalo ozibhalisele.
Isikhumbuzi Sabasebenzisi Abazama Ukulingwa -
INetflix inikezela nge Isivivinyo sezinsuku ezingama-30 cishe yonke indawo , ngaphandle kwe-USA. Uma usebenzisa inguqulo yesilingo, kungenzeka ukuthi unikeze ukuqinisekisa kokukhokha. Lapho ukubhalisa kwakho sekuphelile, iNetflix izovuselela ukubhalisa ngale mininingwane. Uma ungafuni ukukhokhiswa noma ungafuni ukuqhubeka nezinsizakalo, kufanele uzikhiphe ohlwini lweNetflix ngesandla.
Uma isikhathi sakho sesivivinyo sesiphelile, ngeke sikunikeze ukwaziswa. Ngeke icele noma iyiphi imvume yokuqhubeka nensizakalo. INetflix izovuselela ngokuzenzakalela izinsizakalo. Ngakho-ke, njengomthetho ojwayelekile wesithupha, hlala njalo usikhumbuza ngosuku ngaphambi kokubhalisa. Ikunikeza isikhathi esanele sokukhansela ubulungu ngokushelelayo.
Izinketho ezinikezwe ngaphezulu ngeke zisebenzele le nqubo futhi. Kufanele ulandele ngezindlela ezitholakalayo ezibalulwe ngezansi.
Izindlela ezihamba phambili zokukhansela i-Netflix:
Kufanele uzikhiphe ohlwini kunketho efanayo oyisebenzisile ekubhaliseni. Ngakho-ke, kunezindlela ezintathu ezivamile ezaziwayo:
Kusuka endaweni yesikhulumi ngewebhusayithi noma nge-App
Nge-iTunes, uma uyithenge lapho
Abahlinzeki abavela eceleni abakunikeze iNetflix njengebhonasi
Ngayinye yalezi zindlela idinga izinyathelo ezithile okufanele uzilandele. Kunikezwe ngezansi umhlahlandlela oningiliziwe ngakunye kwalokhu. Sethemba ukuthi uzobathola bewusizo futhi beqondakala kalula. Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale!
Indlela1: Indlela Esemthethweni (www.netflix.com)
Le yindlela oyisebenzisayo ukukhansela iNetflix ku-App noma Iwebhusayithi.
Vakashela Iwebhusayithi esemthethweni yeNetflix bese ungena ngemvume. Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza, livule bese ukhetha noma iyiphi iphrofayili
Ekhoneni eliphezulu kwesokudla, kuzoba nomcibisholo obheke phansi. Chofoza kuso. Kuhlelo lokusebenza, kungaba yisithonjana sephrofayela yakho, ngakho-ke chofoza kulokho.
Izinyathelo ezisuka lapha ziyefana. Uhlu luzovulwa. Thola 'ama-Akhawunti' ohlwini bese uchofoza kuwo.
Manje usungabona ubulungu nenketho yokukhokha ngenkinobho enkulu ye-‘Cansela Ukubhalisa. ’Ukube ubusebenzisa i-App, iNetflix ibizovula isiphequluli sewebhu nekhasi elifanayo lapho uchofoza kuma-akhawunti.
Chofoza kunkinobho ethi 'Khansela Ubulungu'. Kungakucela isiqinisekiso.
Viola! Inqubo isiphelile
Le yindlela esemthethweni ongayisebenzisa uma ubhalise ngqo kuNetflix.
Indlela2: Ukukhanselwa kwe-DVD ye-Netflix
Njengoba sonke sazi, iNetflix yaqala njengensizakalo yokuqasha i-DVD. Uma usenakho okubhaliselwe kokuqashwa kwakho, ungalandela inqubo enikezwe ngenhla:
Kusuka kusigaba 'Sobulungu Nenkokhelo', ungathola okuthi 'Khansela Ukubhaliswa Kwe-DVD.'
Ungachofoza kuyo bese uqinisekisa ukuqala ukukhansela
Kulula kanjalo! Manje akusadingeki ukhathazeke ngama-DVD.
I-Method3: Khansela Kusuka ku-iTunes
Uma usebenzise i-iTunes ye-Apple ukuthola i-Netflix, inqubo kanye nohlelo lokusebenza lushintsha kancane. Qiniseka ukuthi usebenzisa i-ID ene-Apple ene-Netflix. Nayi inkomba:
Iya kuzilungiselelo zedivayisi yakho ye-Apple (i-iPhone, i-iPad, njll.)
Thola i-‘Tunes & Apps, ’bese uchofoza kuyo
Lapho uzothola i-ID yakho ye-Apple, uyivakashele bese uqhafaza ku-View Apple ID
Iya ekubhaliseni ku-Apple ID
Njengoba kushiwo ngaphambili, qiniseka ukuthi le yi-ID efanayo ye-Apple ehlotshaniswa ne-akhawunti yakho yeNetflix
INetflix izoba sohlwini lwezinhlelo zokusebenza nezinsizakalo ezibhalisiwe
Chofoza kuso, bese ungakhansela ubulungu kusuka lapho
Indlela4: Indlela Yesithathu
Umuntu wesithathu angaba umhlinzeki wakho weselula noma insizakalo yenqwaba neyebhonasi oyitholile yeNetflix. Kungancika kulo mhlinzeki wesevisi, futhi kuzodingeka uxhumane nesevisi yabo yamakhasimende noma ulandele inketho yabo. Umhlinzeki wesevisi ovela eceleni unendlela ehlukile okufanele ayilandele. Ungaxhumana ngqo nabaphathi babo ukukhansela okubhaliselwe kwe-Netflix.
Ingabe Ukubhaliswa Kwe-Netflix Kuhlala Isikhathi Eside Kangakanani Ngemuva Kokukhanselwa?
INetflix ngeke iyeke ukusebenza ngokushesha ngemuva kokuthi uzikhiphe ohlwini. Izotholakala kuze kube umjikelezo olandelayo wokukhokha. Ngakho-ke uma ukhansele iNetflix ekuqaleni komjikelezo wokukhokha, uzoba nenyanga yonke kuwe.
INetflix ayinikeli mbuyiselo noma ngabe uthola okubhaliselwe minyaka yonke futhi unquma ukuphuma ngemuva kwezinyanga ezimbalwa. Kodwa-ke, uma ufuna ukushintsha uhlelo lwakho bese uthola iphakethe elibiza kakhulu, iNetflix izokukhokhisa nomehluko. Ngokuhambisanayo, uma ushintshela kuhlelo olushibhile, ngeke uthole imbuyiselo.
Lezi izinqubomgomo eziqinile ngaphansi kwemigomo nemibandela ngaphambi kokuthi ubhalisele ku-Netflix.
Noma imuphi umsebenzisi wezinsizakalo emhlabeni kufanele azikhiphe ohlwini ngaphambi kokuqala komjikelezo omusha wokukhokha. Kodwa-ke, kunezimo ku-Netflix lapho ungacela khona ukubuyiselwa imali ngokuxhumana nethimba labo. Uma uzikhipha ohlwini ngosuku lokukhokha futhi i-Netflix isakukhokhisa, bangaqala ukubuyiselwa imali. Kodwa-ke, kungcono ungabambi umoya wakho. Hlala njalo futhi usebenzise izindlela ezinikezwe ngaphezulu zokuthi ungakhansela kanjani i-Netflix. Ngiyethemba, ufunde okuthile okukunikeza inani.
INetflix India StreamFest
Isivivinyo Samahhala se-NordVPN sezinsuku ezingama-30